'Sida uu xayawaan aan la kulmay nolosheyda u baddalay' - BBC News Somali
'Sida uu xayawaan aan la kulmay nolosheyda u baddalay'
Image caption Iyadoo baaskiil wadda ayey ku wareegtay caalamka
Ishbel Holmes oo caan ku ah wadista baaskiilka waxay tartanno gashay iyadoo mataleysa Iiraan, waxay dunida oo dhan kusoo wareegtay iyadoo kaligeed baaskiil wadda, laakiin waqtiyadii ugu horreeyay nolosheeda ma sahlaneyn, dhibaato bandanna way soo martay.
Hooyadeed ayaa deyrisay oo guriga ka saartay iyadoo 16 sano jir ah, waxayna noqotay qof darbijiif ah oo aan hoy lahayn.
Marar badan ayey ku fikirtay inay nolosheeda soo gabagabeyso oo ay isdisho.
Markii ay muddo 5 sano ah ku jirtay xero lagu xannaaneeyo dadka hoy la'aanta ah, waxay garwaaqsatay sida loogu baahan yahay in ay isbaddal ku sameyso nolosheeda.
Waxay billowday inay baaskiil kaxeyso iyadoo qorsheysatay inay caalamka kusoo wareegto, waxaana garab ordayay Eey aan lahayn cid xannaaneysa, kaasoo markii dambe nolosheeda si buuxda u baddalay.
"Xilligii ugu horreeyay ee aan baaskiil raaco waxay ahayd anigoo jooga magaalada Manchester, markaasoo uu aabahay ku wareegi jiray xaafadaha si uu u helo 20kg oo bataati ah, kaasoo qiimaha caadiga ah ka rasiiqan. Markaas wali waan yaraa waxaana baaskiilka aabahay ka saarnaan jiray kursi yar oo uu qeybta dambe iiga sameeyay", ayey tidhi iyadoo sheekadeeda guda galeysa.
"Aabahay wuxuu wax ka baran jiray halkaas, ka hor inta uusan jeclaanin hooyadey. Waxay ahayd xilligii uu Iiraan ka hirgalay kacdoonka, kadibna dowladda Iraan waxay si deg deg ah u jeejisay bixinta lacagaha ardayda wax ka barta dalka dibaddiisa, arrintaas oo ay uga gol lahayd in dhammaan ardayda maqan ay waddanka dib ugu soo laabtaan".
"Lacagtii uu heystay way ka dhamaatay wuxuuna ku khasbanaa inuu baaskiil ku shaqeysto, si uu u noolaado".
"Markii aan 2 sano jir ahaa, waxaan u guurnay Scotland, si uu aabahay halkaas shaqo fiican uga helo, balse guurka waalidkeyga ma fiicnaanin wayna kala tageen".
Ishbel waxay u hartay hooyadeed, oo sidoo kale heysatay 2 wiil oo kale.
Image caption Ishbel Holmes waxay xirfaddeeda ka dhigtay wadista baaskiilka
Markii ay gaartay 16 sano, hooyadeed oo ku qanci weysay hab dhaqankeeda ayaa go'aan ku gaartay inay guriga ka eriso.
"Xaaladdii abid iigu adkeyd ee aan la kulmay waxay ahayd markii ay hooyadey albaabka iga xiratay anigana aan ku khasbanaa inaan iska baxo, meel aan tagana aysan jirin".
Waxaa la wareegay qolyaha xannaaneeya dadka hoy la'aanta ah, kuwaasoo geeyay xarun loogu tala galay dadka sideeda oo kale ah.
Balse dhibaatadii ugu weyneyd ee nolosheeda waxay la kulantay markii ay kufsi u geysteen koox rag ah oo gaari ku kaxeystay iyagoo ku siray inay meel u tilmaanto.
"Waxaan go'aansaday in dhibkeyga aanan cidna u sheeganin, maadaama aan aaminsanaa in mas'uuliyadda khaladka aan aniga leeyahay", ayey tidhi.
Image caption Ishbel Holmes Waxay tartanno ka qeyb gashay iyadoo mataleysa Iiraan
Laakiin culeys badan ayaa dhacdadaas kasoo wajahay nafteeda, waxayna marar badan ku fikirtay inay isdisho.
Ugu dambey waxaa laga eryay xeradii lagu xannaaneynayay, mar kale ayeyna bannaanka kusoo dhacday.
Xilligaas ayaa ahayd markii ay go'aansatay inay dib uga fikirto nolosheeda oo ay tallaabo u qaaddo sidii ay isbaddal u sameyn lahayd.
Waxay billowday wax barasho waxayna xirfaddeeda ka dhigtay ku tartamidda baaskiilka.
La kulankii Lucy
Maalin maalmaha ka mid ah iyadoo baaskiilkeeda kaxeyneysa waxay ku baraarugtay Eey dhadig ah oo garab ordaya.
Eeyga ayaa Ishbel garab socday in muddo ah, wuxuuna u muuqday in uu saaxiib ka dhiganayo.
Inkastoo ay isku dayday inaysan u istaagin, haddana markii dambe waxay go'aansatay inay u dhimriso, si ay dib ugu celiso xaafaddii uu kasoo raacay.
Mar qura waxaa Eeygii dhadigga ahaa soo weeraray Eeyo kale oo koox isku xiran ah.
Ma jirin wax falcelin ah oo ay Lucy sameysay, mana aysan iska celinin eeyihii weerarka kusoo qaaday.
Arrintan waxay Ishbel soo xasuusisay dhacdadii kufsiga ee iyada loo geystay markii ay 16 jirka ahayd.
Maalintaas ayeyna go'aan ku gaartay in ay nolosheeda ka saarto ciriirigii ka heystay falkaas, waxayna garwaaqsatay in nolosha isbaddal looga baahan yahay.
Waxay ballan qaadday in ay garab siin doonto qof walba ama xayawaan kasta oo ay caawinaad la'aan ku dhacdo, si ay uga hor tagto dhibaatadii iyada qabsatay.
"Hal Eey, oo waliba kuwa jidka iska jooga ah, ayaa baddalay nolosheyda oo idil, waxay u muuqataa in Eeygaas uu sameeyay wax aysan bani'aadanka kale badankood sameynin, wuu I badbaadiyay, wuxuuna iga dulqaaday culeyskii qalbiga iga heystay".